Uvelile osolwa kwelokuvukela umbuso wase-DRC | isiZulu
Uvelile osolwa kwelokuvukela umbuso wase-DRC
Kuboshwe ophethe amaphekula e-DRC
Bavelile abase-DRC ababoshwe eLimpopo
'Awasiyo ingozi amavukelambuso aboshwe eLimpopo'
Johannesburg - Sivele ngaphambi kweNkantolo yeMantshi yasePitoli isigayigayi esisisolwa ngokuba yingxenye yetulo lokuvukela uMbuso kaMengameli waseDemocratic Republic of Congo uJoseph Kabila, kusho umbiko wephephandaba iBusiness Day.
U-Etienne Kabila Taratibu usazoqhubeka nokuhlala esitokisini.
Okhulumela iNational Prosecuting Authority uMedupe Simasiku, uthe kubekwe obala amacala abhekene noKabila Taratibu, kulindeleke aphinde abuyele enkantolo ngoLwesine kanye nabanye abangu-19 abasolwa ngecala elifanayo.
USimasiku uthi bazosiphikisa isicelo sebheyili.
NgoLwesine olwedlule, kwavela iqulu lokuqala elibhekene naleli cala, umshushisi uShaun Abrahams uthi amaphoyisa athola uhlu lohlelo lwabasolwa kanye nezikhali.
U-Abrahams uthi amaphoyisa ayaphenya, ezifihlile, ahlangana noKabila Taratibu, ngenyanga ka-Okthoba, nala avuma khona ukuthi uhlela ukuvukela uumbuso wase-DRC.
Iphephandaba i-Agence France-Presse labika lathi uKabila Taratibu ungumfowabo kaMengameli uJoseph Kabila, nokho abazalwa yisisu esisodwa.
I-NPA isinqume ukushushisa uDuduzane Zuma ngelokubulala ngokungenhloso
INational Prosecuting Authority (NPA) isinqume ukuthi izomshushisa lowo oyindodana kalowo obengumengameli uJacob Zuma, uDududzane, ngecala lokubulala ngokungenhloso.
Umshushisi uGerrie Nel uthe ngeke aze angene empini yamazwi nomholi we-Economic Freedom Fighters (EFF) uJulius Malema, wathi umsebenzi wakhe wukushushisa ezinkantolo.
'Sekwenziwe izithembiso eziningi ecaleni lokubulawa kukaMeyiwa'
UKhomishana wamaPhoyisa kuzwelonke, uKhehla Sitole, uthe amaphoyisa asenze izithembiso eziningi ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa owayengunozinti weBafana Bafana, elenzeka eminyakeni emithathu eyedlule.
Dbn: 18-22°C PE: 12-21°C
Pinetown - 20:44:48 PM OVERTURNED TRUCK between Shongweni and Kwandengezi Ezinye zasemigwaqeni